FITSARANA : Noafahan’ny Fitsarana madiodio ireo zaza efatra mpanendaka
Tsy nandalo teny am-ponja akory izy efatra mianadahy mpanendaka eto Mahajanga ireto fa rehefa niakatra Fitsarana ny raharaha taoriana nahasamboran’ny mpitandro ny filaminana azy efatra mianadahy ireo dia efa nahazo fahafahana madiodio sahady. 11 janvier 2017
Hataraina hoan’ireo mpanara-baovao raha nahare ity didim-pitsarana nivoaka mikakisa ireto zaza tsy ampy taona mampihoroho ny manodidina ireto. Raha ny zava-nisy dia saika hanendaka olona izay sendra azy ireo zaza ireo no saron’ny mpitandro ny filaminana niaraka tamin’ny antsy lavalela telo ary mbola nahenoana fofona zava-mahadomelina teny amin’izy ireo.
Efa maro no olona izay sendra ireo zaza tsy ampy taona mpanendaka ireo no voaroba sy naratra raha mifanandrina amin’izy ireo. Tsy mandeha irery izy ireo rehefa manao ny asa ratsiny eny an-dalana fa saika mandeha am-polony farafahakeliny. Maro ireo olona izay lasibatr’ireo zaza ireo no nanome tsiny ny Fitsarana taorian’ny fivohan’ny didim-pitsarana, ny zoma teo satria, tokony hisazy izy ireo noho ny heloka vitany.
Tranga iray mahatonga ny fitsaram-bahoaka ny tahak’izao noho ny tsy fahatokisan’ny vahoaka ny Fitsarana intsony. Nampiaiky ny mponina ao Mahajanga tampon-tanàna ny fahenoana ny asa fanendahana ataon’ireo zaza tsy ampy taona ireo ary efa matahotra mihitsy aza ny olona rehefa mivoka ny trano. Tsy mifidy andro hanaovana ny asa ratsiny ireo zaza tsy ampy taona ireo fa rehefa sendra azy ireo dia tsy maintsy mitondra faisana hatrany.
Mikasika ity raharaha ity hatrany dia fantatra koa fa mpivaro-panafody iray ao an-tampon-tanànan’i Mahajanga ao ihany no mamatsy zava-mahadomelina ireo zaza ireo, raha ny fanadiadana natao ireo voalaza fa zaza nefa mahavita asan-jiolahy ireto. Raha ireo rehetra ireo dia rariny sy hitsiny raha hampiharina amin’izy ireo ny lalàna velona satria voararan’ny lalàna ny fifohana zava-mahadomelina, etsy an-daniny koa ny fandrobana ny fananan’olona dia mbola isan’ny vesatra ahafahana manenjika azy ireo.